बुढेसकालको सबैभन्दा ठूलो पीडा के हो? - दैनिक नेपाल न्युज
बुढेसकालको सबैभन्दा ठूलो पीडा के हो?
प्रकाशित द्वारा: मंगलबार, चैत्र २४, २०७७
एजेन्सी । एक आयुर्वेदिक डाक्टर भएको कारण, म यस प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। बुढ्यौलीको सबैभन्दा ठूलो दु: ख एक्लोपन हो। आज म हजुरबुवालाई जे भए पनि धेरै याद गर्दै थिएँ, त्यसोभए किन मलाई बुढाहरूमा मात्र उत्तरहरू लेख्नु पर्ने लाग्दैन।
खैर, यो पुस्तकहरूमा लेखिएको छ कि यदि बुढा मानिसहरूका मुख्य तीन समस्याहरू छैनन् भने, यसको मतलब यो काम अहिले सम्म राम्रो चलिरहेको छ। उनीहरु ..
आफ्नै हातले खाना खाँनु।
आफ्नै कपडा लगाउन सक्षम हुन।
कुनै सहयोग बिना शौचालयमा जानु ।
तर कसैको दिमाग पढेको छैन।
हामी सोच्छौं कि यो पुरानो हो; उच्च सुन्छ; यसलाई जे पनि कल गर्नुहोस्।
तर यो जनावरले यो पनि बुझ्दछ कि कुन अर्थमा तपाईले उसलाई रोटीको टुक्रा फाल्नुभयो।
मेरो हजुरबुबाले बिहान जानुहुँदा मलाई पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो र मलाई जान भन्यो, “बापा जी, म गएको छु।”
र यो साँझ आउँदा पनि, मलाई भन्नु पर्ने भनेको म आएको हुँ।
अब घरमा सबैलाई मेरो यो बानीको बारेमा थाहा थियो।
तर यदि पाहुना बाहिरबाट आएको छ भने .. त्यसोभए तिमी हाँस्न बिना बाँच्न सक्दैनौ जसको मतलब जुन म आएँ भन्ने बानी नै छ। यो मात्र थाहा हुन्छ कि हो, तपाईं आउनुभयो।
तर कसैलाई यो तर्क थाहा छैन।
किनभने बुढो मान्छेको सबैभन्दा ठूलो दुःख यो हो कि कोही पनि तिनीहरूलाई बोलाउन तयार छैनन्। सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त छन्।
कोही पनि तिनीहरूलाई घुमाउँदैनन्, किनभने ती पनि हृदयहरू छन्।
म हजुरबुबालाई कारको अगाडीको सिटमा राखेर स्पिन गर्न सक्थें किनभने अरू कसैसँग मसँग बसेको जोखिम लिन सक्ने हिम्मत थिएन।
त्यसोभए यसको सजिलो अर्थ यो छ कि मेरो हजुरबुबाको मेरो कार चलाउन सिक्नमा हात छ।
उनको सपना उनको छोरीलाई कुर्सीमा बसाउनु थियो। विवाह हेर्नुहोस्।
र बिरामीहरुलाई खानामा scavenging द्वारा स्वदेशी औषधी दिन। म तिनीहरूलाई पूरा गर्न सकिन, तिनीहरू बाँच्थे। God यदि भगवानले सबै कुरा ठीकठाक राख्नुभयो भने, उनका सबै सपनाहरू पूरा हुनेछन्।
त्यसैले उनले खुसीसाथ आफ्नो जीवन दिए।
तर म औषधालयमा दिनदिनै बूढा मान्छेको अवस्था देख्छु।
उनकी बुहारीले एक वृद्धलाई कुटपिट गरे, र ऊ औषधोपचार गर्न र म रोक्न आई।
उसको अवस्था देखेर मैले आँसु थाम्न सकिनँ।
म बुढा मान्छेहरुलाई दुई श्रेणीमा राख्न चाहन्छु।
एक गरिब बुढापाई: – यसमा दुई भागहरू पनि छन् – एउटा जुन परिवारले माया गर्छ र एउटा जसमा न परिवारको समर्थन छ न पैसा। तिनीहरूको जीवन नरक हुन्छ।
र एक धनी बुढो मानिस: – जसले पेन्सन पाउँछन् वा जसका बच्चाहरूले उनीहरूलाई प्रत्येक महिना पकेट पैसा दिन्छन् र सँगै प्रेम गर्दछन्। तिनीहरूको लागि पृथ्वी स्वर्ग हो। तर जसका बच्चाहरूले सम्पत्ति लुट्छन् र त्यसपछि प्रत्येक दरमा ठेस खानु पर्छ।
हामीले यो बुझ्नु पर्छ।
जस्तै यो शीर्षक हो।
आचरण हामीले हाम्रा आमाबुवा वा हजुरबा हजुरआमासँग गर्छौं।
भोली, हाम्रा बच्चाहरू वा नातिनातिनाहरूले हामी समान व्यवहार गर्नेछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले
–कृष्ण न्यौपाने दमौली, ३१ चैतः तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ स्थित ज्यानटाङ सामुदायिक वनमा रुखमाथि बनिरहेको घरले सर्वसाधारण आकर्षित गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको आर्थिक सहयोगमा हरियाली उद्यानभित्र निर्माणाधीन रहेको [...]
मनकामना माईले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस आजको राशिफल
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । तपाईको [...]
के कन्या राशि भएका मानिसहरू बढी बुद्धिमान हुन्छन्?
एजेन्सी । कुनै पनि विशेष राशिसँग बुद्धिमत्तासँग कुनै सरोकार छैन। कुनै पनि राशिको मानिस बुद्धिमान हुन सक्छ। तर वैदिक खगोल विज्ञानका अनुसार, राशि चिन्हले व्यक्तिमा केही प्रभाव पार्दछ, यदि बढि [...]
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ मनोरञ्जनमुलक यात्रा को सम्भाबना रहेकोछ । कार्य कुसलतालको क्षेत्रबाट मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । भौतिक [...]
यि तीन राशि भएका मानिस हुन्छन् अत्यन्तै अलग
ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनाग परोगमास्। नमोस्तुतेभ्यस् सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा ।।१।। राशिअनुसार व्यक्तिहरुको स्वभाव फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर कुन राशी भएका व्यक्तिको [...]
मौला कालिका माईले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको [...]